विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका किर्तीमानी विश्व साइकल यात्री यतिबेला अस्ट्रेलियाको एक होटेलमा भाँडा मस्काउने नोकरीमा छन् । निकै घतलाग्दो फेसबुक स्टाटसमार्फत् उनले आफ्नो नोकरीबारे सार्वजनिक गरेका छन् ।
केही वर्षअघि बिराटनगरमा आफ्नो पुस्तकको प्रबद्र्धनका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले विश्वमा साइकल यात्रामार्फत् नेपाललाई चिनाएको, देशको झण्डा बाकेर विश्वको फन्को मारेको भए पनि सरकारले मूल्यांकन नगरेको भनेर गुनासो गरेका थिए । शाहले आफ्नो साइकल यात्राको संस्मरण पुस्तक लेखेका थिए, ‘पुष्कर शाहः संसारलाई साढे पाँच फन्को’ ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले १ सय ५० वटा मुलुकको साइकलबाट भ्रमण गर्दा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको बताएका थिए । त्यसको झण्डै साढे चार वर्षपछि उनले अहिले अस्ट्रेलियामा भाँडा माझ्दै गरेको तस्बिरसहितको स्टाटस फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बिहीबार उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ,
११ बर्षमा साइकलबाट संसारलाई साढे पाँच फन्को लगाएर नेपाल फर्केर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको ७ बर्ष बितेछ ! यात्रा सकेर नेपाल फर्केको ७ बर्षपछि मेरो देशको सरकार प्रमुखलाई भेट्ने शुअवसर मिल्यो ! सम्माननीय ज्युको स्वकीय सचिबले मेरो परिचय गराउनु भो !
” ए पुस्करजीलाई त म चिनीहाल्छु नि ” सम्माननीयले गर्ब साथ बोल्नु भो !
म खुशीले गदगद भएँ !
“अनि भन्नुस पुस्करजी”
सम्माननीयको आग्रहले म बोलें
जीवनका स्वर्णिम बैंसहरु
दुइ लाख एक्काइस किलोमिटर
संसारलाई साढे पाँच फन्को
त्यसपछि संसारभरिको झन्डा बोकेर
सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड बनाए !
अनि ? सम्मानीयले सोध्नु भो !
” संसारलाइ साडे पाँच फन्को पुस्तक लेखें ”
” वाउ ! ” सम्माननीय ज्यु दङ्ग पर्नु भो !
” म २०४६ सालको जन आन्दोलनको घाइते पनि हो , चैत्र २४ गते दरबारमार्गमा प्रहरीको गोलिले दाहिने हात छेडेर गएको थियो !
बिर अस्पतालले मृतक घोषित गरेर मेरो नाम शहिदको सुचीमा छ ! ”
भन्दैथें , भन्दैथें , सम्माननीय ज्यु त अघि नै ढलेछन् ! स्वकीय सचिब र सुरक्षा गार्डहरुले खै के के सुँघाएर , पानि छम्केर होसमा ल्याए ! मेरो उग्रक्षमता देखेर डराएछन् क्यारे ।
” त्यत्रो ४६ को योद्धा , जिउदो शहिद, ऐलेसम्म पार्टीसदस्यता लिनु भाको छैन ? ” घर फर्केको साँझ स्वकीय सचिबले मलाई फोनमा सोधे ! उनलाई म ४६ सालदेखि नै नजिकबाट चिन्छु ! उनै हुन् मलाई गुच्चा र गुलेली बोकाएर जन आन्दोलनमा होमिन सिकाउने !
” देशको झन्डा बोक्नेले पार्टीको झन्डा बोक्दैन ” मैले उनलाई सुनाएँ ! त्यसपछि मेरो डुलुवा अनुभव मेरो माटोमा उपयोग नहुने निस्कर्ष निस्कियो !
आमाले मलाई माटो र पसिनालाइ माया गर्न सिकाइन ! म माटोलाइ चट्टकै माया मारेर पसिनालाइ माया गर्न हिडें !
ऐले अस्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउदैछु ! एकबारको जुनीमा !
पुस्कर शाहकाे फेसबुक स्टाटस हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्